Ny karavasy, tolo-kevitra arakaraka ny hetsika sy tolo-kevitra ampiasaina | Soavaly Noti
Jenny monge | | soavaly, fiofanana
Ny vokatra mitaingina dia amin'ny mitaingina a fanitsiana sy fitaovam-pifandraisana miaraka amin'ny soavalinay ary noho izany tokony ho mailo amin'ny fomba sy ny fotoana ampiasantsika azy isika.
Izany dia tsorakazo marefo, matetika rakotry lamba na hoditra izay indraindray dia faranana amin'ny randrana vita amin'ny hoditra na volombava vita amin'ny hoditra. Io dia ampiasain'ny mpitaingina soavaly soavaly.
Afaka mahita isika karazan-karavasy isan-karazany arakaraka ny fiasa na karazana hetsika ho an'iza no tadiavinay azy ireo.
Hahafantatra bebe kokoa momba an'io fitaovana io ve isika?
Izy ireo dia mety ho ampahany amin'ny fitaovana na fitaovana ampiasain'ny mpitaingina soavaly. Dia a fanampiana fanampiny ary koa ny singa hafa toy ny vatan'ny mpanampy, fampidirana na famatorana.
Azo ampiasaina izy ireo na mitaingina soavaly na mijanona eo akaikiny ilay mitaingina azy.
1.1 Ahoana ny fampiasana ny karavasy?
1.2 Soso-kevitra momba ny fampiasana karavasy
2 Karazana karavasy
2.1 Mandeha an-tongotra na karavasy ankapobeny
2.2 Karavasy mitsambikina
2.3 Karavasy akanjo
2.4 Karavasy ho an'ny akanjo voajanahary, fametahana ary familiana na fitoeran-tsoavaly
Ity fitaovana ity ankoatry ny fanompoana ny mandrisika ny biby, dia ampiasaina ho fanitarana ny vatan'ny mpitaingina azy. Amin'izany fomba izany dia afaka mahatratra ny ampahany amin'ny vatan'ny Equine ka miaraka amina maivana mikasika ilay soavaly hitazona ny sainy amin'ny fanazaran-tena eo am-panatanterahana na hampitomboana ny hafainganana. Noho izany dia ampiasaina ho toy ny fanamafisana.
Zava-dehibe ny fahalalana izany tsy tokony hatao sazy na oviana na oviana, fa ho fanampiana hifandraisana amin'ireo soavaly. Noho izany dia tsy maintsy mandinika isika alohan'ny hampiasana azy, araka ny nantenainay tamin'ny fiandohan'ilay lahatsoratra. Ny soavalintsika dia tsy maintsy mamaly ny fanentanana ny karavasy amin'ny fanajana, fa tsy amin'ny tahotra.
Ny fampiasana ny karavasy dia tokony hoheverina ho anisan'ireo loharano farany ampiasaina. Ny mpitaingina dia tsy maintsy mahafantatra ny fotoana sy ny fomba fampiasana azy hatramin'ny vokatra voitaingina ny fampiasana diso dia hisy vokany ratsy foana amin'ny soavaly.
Ahoana ny fampiasana ny karavasy?
Ny mpitaingina dia tsy maintsy raiso ny karavasy amin'ny tanany avelao ny lohany hiala kely amin'ny tanany. Miaraka aminy ianao dia tokony hanome fikitihana fohy sy marina an'ilay biby. Ny zavatra mahazatra dia ny mandray ny karavasy amin'ny tanana anatiny satria ny tongotra anatiny no mitazona ny filentehana ary miondrika ny soavaly.
Soso-kevitra momba ny fampiasana karavasy
Ny karavasy no tena ampiasaina manitsy soavaly tanora rehefa, ohatra, dia tsy mankatoa ny famantarana hivoatra asehon'ny tongotsika. Amin'izay dia misy kitapo fohy sy maina omena mba hahafahany mamaly sy mandinika tsara ireo famantarana omentsika azy amin'ny tongotra.
Ny fisian'ny karavasy fotsiny afaka mahatonga ny soavalintsika hihaino sy hanoa kokoa. Imbetsaka ny fampiasana azy amin'ny biby dia tsy ilaina.
Mandritra ny mitaingina, Aleo mampiasa ny feonao (na kitiho ny lela ohatra) mba hilazana amin'ilay biby fa tsy manao hetsika na manao fanatanjahan-tena tsara izy, fa tsy mampiasa karavasy.
Ao amin'ny ny fitafiana dia manampy amin'ny fanatsarana ny asan'ny hindterior, noho izany dia tsy maintsy kitihana ao ambadiky ny ombilahintsika fotsiny io.
Amin'ny mitaingina kilasika, ny mpitaingina moto dia tsy maintsy manana ny fahaizana manova ny karavasy amin'ny tanana iray ka hatramin'ny tanana hafa, na dia azo atao aza ny mitondra izany amin'ny tanana anatiny amin'ny fanazaran-tena.
Ary tena zava-dehibe, tsy, Tsy tokony hampiasa ny karavasy velively isika raha tezitra na tsy manam-paharetana.
Misy karavasy sy halava samy hafa mba hifanaraka amin'ny filan'ny fifehezana tsirairay ao anaty mitaingina.
Amin'izao fotoana izao dia mazàna ny karavasy vita amin'ny atody fiberglass, fitaovana maivana manome fahafaha-manao azy. Ny ivelany tena mahazatra dia ny nylon nilatsaka, na dia misy karazany aza. ny ny tahony, kiheba ary kiheba dia azo atao amin'ny hoditra, polyurethane na fingotra.
Andao hojerentsika izao ireo karazan-karavasy misy, arakaraka ny hetsika izay hotanterahintsika:
Mandeha an-tongotra na karavasy ankapobeny
Amin'ity karazana karavasy ity, mazàna dia misy maodely sy loko maromaro hisafidianana. Matetika izy ireo henjana fa mora miovaova kokoa noho ny jacks mitsambikina. Miaraka amin'ny habe antonony eo anelanelan'ny 65 ka hatramin'ny 75 cm, dia afaka manana takelaka misy habe samihafa izy ireo, ary koa fehin-tànana mba tsy hahavery azy.
Ny fohy sy henjana, misy halavany eo anelanelan'ny 50 sy 70 cm ary ny Ny tahony dia matevina kokoa ary vita amin'ny akora tsy mihetsiketsika mba hangejana tsara.
Ny tendron'ny karavasy dia volotara, izay rehefa mikasika ny soavaly dia mitabataba toy ny fikapohana izay mahatonga ny biby hamaly. Tena izany ilaina amin'ny fitazonana ny sain'ny soavaly rehefa miasa eo amin'ilay lalana.
Ity karazan-karavasy ity dia ampiasaina amin'ny sisin'ny croup na ao ambadika.
Raha tsy mandalo sakana ny soavaly dia tokony ho tsaroana fa ny karavasy dia tsy fomba famaizana. Misy ny hetsika hamahana ireo olana ireo nefa tsy mila manantona ireo izay manimba ny sakaizantsika. Tena zava-dehibe ny fahatokisan'ny biby antsika ary zavatra azo tanterahina amin'ny asa izany. Ampidino ny haavon'ny sakana izay manome olana antsika na mahatonga ny biby hanaraka soavaly hafa.
Lava noho ny teo aloha izy ireo, mirefy 90 ka hatramin'ny 130 cm. Manify sy malefaka satria tadiavina ny effet zimbre. Matetika izy ireo dia mifarana amin'ny fantsona manify tena manify.
Raha tokony ho raisin'ny tantana toy ny teo aloha dia ity tratra ambany izy ary entina eo am-balahan'ny mpitaingina azy. Maharitra lava toy izany izy, dia ampiasaina amin'ny valan'ilay biby hitarika azy, hanitsy azy, hangataka hetsika bebe kokoa na hampihenana ny hamafin'ny fihetsehany. Ny hevitra dia hery ampiasao izany nefa aza avela hiala ny vatan-kazo amin'ny vodin-tanana fotsiny. Ny fikasihana dia tokony ho eo anilan'ny soavaly, ao ambadiky ny ombilahintsika, na any aoriana.
Azo ampiasaina mitsangana koa tsy mitaingina soavaly, mikasika ny tongotry ny biby.
Karavasy ho an'ny akanjo voajanahary, fametahana ary familiana na fitoeran-tsoavaly
Tena mitovy amin'ilay taloha izy io, fa intsony, manodidina ny 150 sy 230 cm, nanomboka Ampiasaina indrindra hifehezana ny fihetsiky ny soavaly sy hitarihany azy lavitra. Ohatra, rehefa maratra amina lalana boribory ilay izy ary mihodina anaty faribolana ilay biby.
Ny maodely sasany dia teleskaopika ihany koa ka afaka mahatratra ny halavany mihoatra ny 4 metatra izy ireo.
Vatana henjana sy karavasy na karavasy mifamatotra amina remover miforitra izy ireo.
Rehefa mampiasa an'io karavasy io ao anaty fanariam-pako dia ampiasao ireo izay afaka mahatratra hatramin'ny 450m.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » soavaly » La Fusta, karazany ary tolo-kevitra ampiasaina